‘सुख्खा बन्दरगाहासँगै दोधारा चाँदनीलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउनु पर्छ’ - Recent Nepal News
‘सुख्खा बन्दरगाहासँगै दोधारा चाँदनीलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउनु पर्छ’
प्रकाशित मिति: सोमबार, कार्तिक २६, २०७५ समय: १८:५६:११
प्रतिनिधि सभा लागि कञ्चनपुर क्षेत्र नंं. ३ मा वाम गठबन्धनबाट एमालेका उम्मेदवार डा. दिपक प्रकाश भट्ट विजयीभएपछि माहाकाली नगर क्षेत्रको विकास मुलधारमा जोड्न प्रयासरत छन् । कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. दिपक भट्ट तीन दशक देखि राजनीतिक सक्रिय छन् । पुख्र्यौली घर बैतडी भएका भट्टको जन्म २०२९ साउन २७ गते बैतडी दशरथ चन्द नगरपालिका–१ देबलहाटमा भएको हो । उनी विद्यार्थी जीवन देखि राजनीतिमा सक्रिय छन् । २०४६ को जनआन्दोलन अघि नै भट्टको राजनीतिक यात्रा सुरु हो । घर परिवारको राजनीतिक वातावरणमा सानै देखि घुलमिल भएका उनले २०४३ देखि तत्कालिन (माले) को विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुबाट राजनीतक यात्रा सुरु गरेका हुन् ।
२००७ सालको क्रान्तिका अगुवा स्वर्गिय दत्तराम भट्टबाट प्रेरित भएर राजनीतिमा आएका हुन् । ६ महिना डोटी जेल बसेका स्वर्गिय भट्ट उनका ठूलो बुवा हुन् । ‘घरमा राजनीतिक वातावरण थियो, त्यसबाट सानैमा प्रभावित भए,’ उनले भने । एमालेका विदेश विभाग सदस्य भट्ट पार्टीमा स्वच्छ छवि, बौद्धिक व्यक्तित्व, परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिका जानकार नेता हुन् । वाम गठबन्धनका उम्मेदवार उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, खानेपानी, सडक सबैको विकास गरी क्षेत्र नं. ३ लाई नमूना बनाउने एजेण्डा अघि सारेका छन् ।
‘मिठा र गुलिया कुरा गरी जनतालाई धेरै दिनसम्म भ्रममा राखियो, म त्यसलाई तोड्न चाहन्छु’ उनी भन्छन,‘यस पटक जनताले त्यो मौका दिने छन् ।’ दार्चुलाको लटिनाथ माध्यमिक विद्यालय मार्माबाट प्राथमिक शिक्षा हासिल गरेका भट्टले महेन्द्रनगर मावि(साधरण) बाट प्रवेश उत्तीर्ण गरेका हुन् । उनले लटिनामा कक्षा १–५ र बैजनाथ माविमा कक्षा ७–८ सम्म अध्यन गरेका थिए । विज्ञान र राजनीति शास्त्रका स्नात्तकोत्तर भट्टले जवाहरलाल नेहरु विश्विद्यालयबाट अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र सुरक्षामा विद्यावारिध (पिएचडी) गरेका छन् । समृद्धि तथा बिकासको बारेमा माहाकाली नगरपालिका क्षेत्रको भ्रमणको बेला प्रतिनिधी सभाका सदस्य डा. दिपक प्रकाश भट्ट संग पत्रकार पप्पु गुरुङ्गले गरेको संक्षिप्त कुराकानीको अंश
डा.दिपक प्रकाश भट्ट
कञ्चनपुर क्षेत्र नं. ३
दोधारा चाँदनीमा जुन सुख्खा बन्दरगाहा बन्ने बिषयमा हल्ला मात्रै हो भन्ने कुरा छ नि ?
–बिकासको कुरा गर्नु पर्दा सुख्खा बन्दरगाहाको लागी जुन काम अघि बढिरहेको छ् । नेपाल–भारतको बिच सहकार्यबाट अघि बढ्ने भएकोले अहिले यो स्थानमा सुख्खा बन्दरगाहा बन्ने भन्न सकिने अवस्था छैन् । दोधारा चाँदनीको कञ्चनभोज क्षेत्रमा सुख्खा बन्दरगाहा बन्ने भन्ने टुङ्गो लागेको अवस्था छैन् । जंगल काट्न भारत तर्फ विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन् । हाम्रा तर्फबाट पनि विकल्पमा छलफल चलिरहेको छ् । बढी सम्भावनाको रुपमा कञ्चनभोज क्षेत्र परेको छ् ।
भारत तर्फबाट पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा जंगल पर्ने ठाँउमा जंगल काट्ने कार्य उनिहरुका लागी सजिलो छैन् । राज्यले ४ वटा सुख्खा बन्दरगाहा निमार्ण गर्ने अबधारणा लिएको छ् । पहिलो बिरगन्ज, जुन निमार्ण कार्य पुरा भएर संचालनमा आएको छ् । दोस्रो भैरवा, तेस्रो नेपाल गन्ज र चौथो दोधारा चा“दनी । अरु ठाँउमा जग्गाको काम सकिएर काम अघि बढिसक्यो । दोधारा चाँदनीमा अब यो वर्षबाट काम अघि बढ्ने क्रममा छ् ।
यसको लागी ७० देखि ९० बिघाह जग्गा चाहिन्छ् । सुख्खा बन्दरगाहाको लागी जग्गा सरकारले लिएर जनतालाई बिचिल्लीमा पार्ने हैन् । बिकास संग उनिहरुलाई संग संग लिएर हिडाउने सकारको निती हो । जुन खासगरीकन अरवन डेभलोप्मेन्ट पोलिसी अर्थात बिकासका योजना र निती त्यसमा जनता बिस्तापित गर्ने हैन कि, जनता संग संगै लिएर जाने उदाहरण हुन् । तपाईहरुले ख्याल गर्नु भयो भने महाकालीमा पक्की पुल निमार्ण हुदै छ् ।
पुल निमार्णको क्रममा कयौंको घर जग्गा, गोठ तथा निमार्ण भएका भौतिक संरचना सरकारले पुल निमार्णको लागी लिईरहेको छ् । त्यो संरचनाको क्षती पुर्ती सरकारले दिईरहेको छ् । त्यसले राज्यले दिने क्षती पुर्ती लालपुर्जा भएको वा नभएको खण्डमा दुबैलाई राज्यले क्षती पुर्ती दिने ब्यवस्था छ् । लालपुर्जा नभएको हकमा दुई तिन तरिकाले क्षती पुर्ती दिईरहेको छ् । सबैले क्षती पुर्ती पाउछन् । त्यसको लागी समग्र लगत संकलन गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर सिफारिस गर्नु पर्ने हुन्छ् । पुर्जा नभएको हकमा ।
यहाँले यस क्षेत्रको लागी कस्ता योजना अघि सार्नु भएको छ् ?
–मुख्य कुरा अहिलेका बजेट भनेको केन्द्र सरकार हेर्ने काम चाही राष्ट्रिय स्तरका योजना, प्रदेशले मध्यम खालका योजना र स्थानिय तहबाट स्थानिय स्तरका योजना हुन् । बिगतमा हामीले टोल तथा बस्ती जोड्न बाटो बनाउदा पनि रातो किताबमा पार्नु पर्ने हुन्थ्यो । यसपाली उदाहरणको लागी हेर्नु हो भने, दोधारा चाँदनीको भानु बहुमुखी क्याम्पसमा बिभिन्न शिर्षकमा कमा गर्ने गरि प्रदेश सरकारबाट रु. ५५ लाख रकम आएको छ् ।
यस्तै दोधारा चाँदनीकै जनज्याती माबिमा रु. ३६ लाख रकम बिनियोजन भएको भएको छ् । त्यहा पर्खाल निमार्ण गरेपनि, भवन निमार्ण निमार्ण गरेपनि त्यहाका स्थानिय अभिभावक, बिद्यालय ब्यवस्थापन समिति तथा स्थानिय राजनितिक दलहरुले छलफल गरेर गर्ने भन्ने हो । यस्तै दोधारा चा“दनीमा स्वास्थ्यको बिषयमा बजेट हेर्ने हो भने ३ वटा स्वास्थ्य केन्द्र तथा चौकीमा ६० लाख भन्दा बढी रकम आएको छ् । यस्तै हामीले बिकास कार्यको लागी थुप्रै बजेट बिनियोजित गरेका छौ । अनि राष्ट्रिय हिसावले बन्ने योजनाहरुमा अहिले प्राथमिकतामा परेको बिषय भन्नुहुन्छ भने, औद्योगिक क्षेत्र बनाउने हो ।
मैलै तपाईहरुलाई पनि बिकासमा हामी संग संगै जानु पर्छ भावनाले छिट्टै एउटा हाम्रो नजिक रहेको छिमेकी देश भारत जुन औद्योगिक क्षेत्रमा निकै फड्को मारेको छ् त्यही भ्रमण गरौ भन्ने हो । उत्तराखण्ड राज्य बनेको झण्डै १८ वर्ष उत्तराखण्डले के कसरी प्रगती ग¥यो ? उत्तराखण्ड राज्यले औद्यौगिक निती बनाएर के कस्ता परिवर्तन ल्याए ? ईकोनोम्किसमा ‘सप्लाई चेन’ भन्ने सिद्धान्त छ् । ठुलो निमार्ण कम्पनीले समान तयार गर्लान तर उनिहरुलाई चाहिने कच्चा सामग्री तथा अन्य समाग्री हामीले यहाँ तयार गर्न सक्यो भने पनि हाम्रो समृद्धि हुन्छ् ।
निजी तथा उद्योग बाणिज्य महासंघको सहयोगमा हामीले तत्काल हामीले ७ नंम्वर प्रदेशमा प्रमुख ब्यापारिक नाका बनाउने छौ । ७ नंम्वर प्रदेशमा एउटा पनि ब्यापारिक नाका नभएको हुदा कम्तीमा भारत संग नाका बनाउने लक्ष्य छ् । भन्सारको रुपमा बेलौरी, खग्रौला, झुलाघाट दार्चुला र चिन संग २ वटा नाका एउटा बझाङ्गबाट, एउटा दार्चुलाबाट तत्कालको लागी बझाङ्गलाई प्राथमिकता राखिएको छ् । जुन बन्ने नाकाहरु दोधारा चाँदनी संग सम्बन्ध राख्छन् । जुन चाही अन्तराष्ट्रिय ब्यापार नाका बनाउने भनेका छौ ।
ईन्टी ग्रेटेड चेकपोष्ट बनाउदै अबको मोडेल फरक आएको छ् । सुख्खा बन्दरगाहा यहाँ बन्दै छ भन्ने सरकारको प्राथमिकताले दोधारा चा“दनीलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने कम्तीमा ५ सय बिघाह जग्गा छुट्टयाएर औद्यौगिक क्षेत्र बनाउनु पर्छ । त्यसमा तपाई हाम्रो सबैको सहयोग चाहिन्छ् । आज नेपालको ब्यापार भारत संग ७० प्रतिशत त्यसैको ७० प्रतिशत बरिगन्जबाट हुने गर्छ । त्यसलाई डाईभर्सन गर्नु प¥यो । हिजोको दिनहरुमा केन्द्रिकृत राज्य प्रणालले केही क्षेत्रमा बिकास ग¥यो । सबै समुदाय सबै जातजाती तथा ताप्कालाई बिकासको मुलधारमा ल्याउनु पर्ने अहिलेको सरकारको धारणा रहेको छ् ।
महाकाली नदी र जगबुडा नदीको तटबन्ध निमार्ण यस वर्ष रोकिएको भन्ने हल्ला छ नि ?
– त्यसो हैन् । तबटन्धको काम रोकिएको छैन् । केन्द्र सरकारबाट प्रदेश सरकारमा जिम्मेवारी बाडफाँड गर्दा राष्ट्रिय योजनाहरुमा केन्द्रबाट अघि बढ्छ् । केही काम प्रदेशमा, त्यस्तै बिभाग बनाएर काम अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ । प्रदेशमा पनि उद्योग, पर्यटन बिभाग पनि हुन्छ । सम्बन्धीत मन्त्रालयमा हामीले त्यो बिभाग स्थापना गर्दैछौ । त्यो काम गरिरहदा पहिलो कुरा केन्द्रबाट बजेट छुट्टयाउने कि, प्रदेशबाट छुट्टयाउने केही एक छिनको लागी समन्वय गर्न समय लाग्छ ।